Mitsva mitsva muna Kukadzi semwedzi weMoyo paApple Watch | Ndinobva mac
Pasina mubvunzo Apple Watch iri kugadzira vanhu vazhinji vasina kunyatsorovedza zuva nezuva kuti vadaro. Izvi zvese pamwe chikamu chekukanganisa kweAction app pane chishandiso chemuoko chinotikurudzira nevamwe mibairo, zvinetswa uye zvinamirwa zveMessage app.
Mwedzi mumwe chete, vamwe vashandisi vakakanganisa kuwana zvibodzwa uye zvinangwa zvemwedzi waKukadzi vasina kusangana navo, vamwe vacho application yeApple Watch yakavaudza kuti vaifanira kushandisa avhareji yemazuva ese inopfuura 25.000 Kcal kana kumhanya marathoni matanhatu ... Izvi zvinoita sekunge zvaizogadziriswa uye izvo izvo Apple zvairi kugadzirira iri nyowani chiitiko chinetso cheiri zadza mhete vhiki yaFebruary 8-14.
Kana vhiki Yekuita yapera Vashandisi vanobudirira vanogashira aya menduru kuti vawedzere zvakananga kune zvakabudirira zvakambowanikwa uye zvitambi zvitatu zvitsva zvekutumira mumeseji ane hupenyu neApple Messages application. Izvi zvinodaro murondedzero yedambudziko iri nyowani:
Ita chimwe chinhu chakanakira moyo wako uye uwane kubudirira kutsva. Vhara iyo Exercise mhete kwemazuva manomwe akateedzana kubva Kukadzi 8 kusvika 14 uye uwane izvi kubudirira.
Pasina kuda kuve zvinopfuura chimwe chishandiso chekukurudzira vashandisi kuti vafambe, iyo Apple Watch uye chiitwa cheKushandisa pano neapo vanoita mhando dzematambudziko idzo dzakanangana nekupera munguva, ndiko kuti, hazvigone kuwanikwa kubva kune imwe fomu isiri yekuita zvechiitiko mukati memazuva akarongwa nefemu. Chero zvazvingaitika, zvinogara zvakanaka kurovedza muviri uye kana uine Apple Watch, hapana mubvunzo imwe nzira yekuzvikurudzira kutanga nayo. Mukupedzisira, ivo vanobatsirwa nerudzi urwu rwekupokana ndivo vanogara vari vashandisi kubvira kurovedza muviri kwakanakira muviri wedu, chimwe chinhu icho Apple inoedza kupinza mune wese munhu akapfeka imwe yewachi dzayo paruoko rwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mitsva mitsva muna Kukadzi senge Mwedzi weMoyo paApple Watch
Mashandisiro ekushandisa Windows keyboard ne Mac
Brazil ichave zviri pamutemo Apple Pay gare gare gore rino